editor — Sun, 06/02/2019 - 06:46
सपनाको भट्टीनजिकै पुगेपछि प्रायः सबै तन्नेरी र वृद्धहरूको आँखा पनि टक्क अडिन्थ्यो । चाहे सद्भावनाले होस या प्यासले । नअडियोस् पनि किन सपना अति सुन्दर मानौँ परीजस्तै थिई । गोरो बाटुलो बान्की परेको अनुहार थियो । रगत चुहिएलाजस्तै थिए दुवै गालाका पाटाहरू, आँखाहरू त्यस्तै ठुलाठूला सुन्दर थिए । अनारको दानाहरूझैँ मिलेका दाँतहरू थिए । पुष्ट छाती, हलक्कै बढेको शरीर उसको आकृति हेरेपछि धित मार्न सबैलाई हम्मेहम्मे नै पर्थ्यो ।
धुम्रपान मुक्त नगर
HomSuvedi — Fri, 05/31/2019 - 15:02
नितान्त माैलिक र सान्दर्भिक
लघुकथाः धुम्रपान मुक्त नगर
धमाधम गरेर कान्ताले लुगामा आइरन गरेर तयार पारिदिइन् । दयारामले हतारहतार चिया नास्ता गरे । लुगा फेर्दै चुरोट तान्न खोजेको चुरोट सकिएको ता उनलाई बल्ल पो थाहा भो ।
"ए सपना !" काम गर्ने केटीलाई कराए । तुरुन्त हाजिर भई ।
"जा त, चुरोट किनेर ले सकिएको रहेछ ।" आदेश अनुसार केटी दोकानतिर लागी ।
भुराभुरीलाई चुरोट खैनी किन्न बेच्न नपाइने सरकारी नियमलाई उनले दोकानेसँग सम्झौता गरेका छन् उनी ता जनप्रतिनिधि न हुन् । नियम भनेको त सर्वसाधारणलाई न हो । यसैले दयारामकोमा काम गर्ने सानी केटी सपनालाई दोकानेले अलिक लुकाएर चुटोट दिने गरेको छ ।
घुर्मैलो साँझ, प्रभातको ठिक उल्टो, साँकल हुन लागेको थियो । लाग्छ उलथपुलथ हुन नसकेर सृष्टि खरानी हुन खोजी प्रलय हुन लागे जस्तो । हुरी वतास छताछुल्ल बहिरहेको अनि बीचमा वादलैजस्तो आकारमा खुर्पेजून पनि । लाग्छ संघर्ष गर्न विर्सिएजस्तो बादलहरू खजमज छ्यालव्याल भएर अस्तव्यस्त । अधिष्ठाता, परमात्मा, परमेश्वर कर्म गर्दागर्दा थाकेर हाँफेर व्रह्माण्डीय कार्य पुरा गर्न नसकी अधकल्चो भएजस्तो । तेजिला ताराहरू झिपझिप ससाना थोपाहरू जस्तो ।
॥ बिकिरण ॥ — Fri, 05/03/2019 - 13:33
नयाँ वर्षको आगमनले नयाँ जोश, नयाँ आशा, नयाँ विचार, नयाँ कार्य र नयाँ जिम्मेदारी बोध गराइरहेको अवस्था थियो । उमेर ८७ कटेको थियो । तैपनि मेरो मन मस्तिष्क तेजिलो देख्दा वरिपरिका कम उमेरका महिला पुरुषहरु पनि दङ्ग थिए । नेवार परम्परामा मानिसको पहिलो जंकु - ७७ वर्ष ७ महिना र ७ दिन ७ पला पुग्दा भीम रथारोहण ; दोस्रो जंकु - ८३ वर्षमा अर्थात १ हजारपटक चन्द्रमाको दर्शन गरिसकेको मानेर सहस्र चन्द्ररथारोहण; तेस्रो जंकु - ८८ वर्ष ८ महिना ८ दिन ८ पला पुग्दा देवरथारोहण; चौथौं जंकु - ९९ वर्ष ९ महिना ९ दिन ९
editor — Mon, 04/29/2019 - 18:19
"ए हरि, त्यो बिउ फाल् त, यता मेरो मेलो पछाडि परिसक्यो," ठुल दिदी माथिल्ला गडाबाट कराइन्।
प्रियसी को डायरी भाग - १
Basanta Subedi — Sat, 04/27/2019 - 22:34
सँगै रहेको मोवाईलमा अचानक हिन्दी गीत वज्यो, तेरे साथ विना.....
सधैँ साईलेन्ट हुने मोवाईलमा अचानक गीत वज्दा तर्सिएँ । वहिनी हरुले मोवाईल चलाँउदै थिए गीत वज्ने वनाइदिएछन् । मोवाईल हातमा लिएँ टचस्क्रिनमा उही नाम थियो कोड भाषामा उल्लेखित उही नाम जुन नाम देख्नासाथ मुटुको गति अचानक बढ्छ स्वास रोकिएला जस्तो लाग्छ ।
बहिनीलाई मोवाईल जिम्मा दिएँ भन्दे दिदी बाथरुम गाकी छे । बहिनीले आदेश पुरा गरी ।
bhuwan.np — Sat, 04/27/2019 - 19:08
HomSuvedi — Sun, 04/21/2019 - 09:22
"के भो र यसरी निन्याउरो हुनु भाको ?" पत्नीले निकै पटक सोधिसकिन् खेमजीलाई । तर उनी घर फर्किएर आएपछि यत्तिकै घोरिएका छन् । बोलेका छैनन् । फेरि पनि उनले खेरिन्- "हन के भो ! किन नबोल्नु भाको ? भन्नू कुरा के हो । केही भयो कि चूप लागेर बस्ने बानी छ…..!"
निकै खेरखारपछि खेमजीका मनका कुरा बिस्तारै प्रकट भए-
"कस्तो साइतमा हिंडिएछ । अहिलेसम्म सम्झनासाथ रौं ठाडा भइरकेका छन् !"
"कुरा के हो भन्नु न त !"
Biju Subedi — Sat, 04/20/2019 - 21:08
मिर्मिरे विहानीको चिसो मौसममा त्यो गाडी एक तमासले सुस्त–सुस्त गतिमा गुडिरहेको थियो । गाडीको सिसा थर्काउँदै स्याट स्याट हावा रोकिने–जाने आवाज आइरहेको थियो । गाडीको रफ्तार छुकछुके रेलको जस्तै लाग्थ्यो । बाटोको दायाँबायाँ रुखहरु हल्लिएर पातहरु झरिरहेको थियो । चराको चिरचिर विरविर आवाजले उसलाई झनै मन्त्रमुग्ध पारिरहेको थियो । “चक्रपथ परिक्रमा” भनी गाडीमा लेखिएको थियो । काठमाण्डौं के होला ? कस्तो होला ? को कौतुहलमा आएको नविन काठमाण्डौंको नविन परिवेशमा उक्त गाडीमा महाआनन्दित भइरहेको थियो ।
Sangram Kirati — Thu, 04/04/2019 - 07:26
विहान उठेर नजिकै भित्तामा झुण्डिएको भित्तेपात्रोमा नजर डुलाएँ । आज गुरु पुर्णिमा रहेछ । मनमनै सोचेँ, ‘फेसबुकमा आचार्य गुरुको फोटो राखेर गुरुहरु प्रति सादरभाव प्रकट गर्नुप¥र्याे ।’ आचार्य गुरु मेरो आदर्श व्यक्ति हुन् । म जहाँ जस्तो स्थितिमा छु उनकै मार्ग दर्शनले छु ।
॥ बिकिरण ॥ — Tue, 04/02/2019 - 22:41
आज अचानक मलाई नाम परिवर्तन पो गर्नु मन भयो । त्यो नाम भएको व्यक्तिको रूप सित मेरो रङ्ग पनि मिल्छ र उनको स्वभाव सित मेरो थोरै ढङ्ग पनि मिल्छ । विधम्बना मेरो नाम त्यो नभएर अरु नै कुनै एक छ । तर मलाई आज मेरो नाम "कृष्ण" राख्नु मन भयो ।
Biju Subedi — Wed, 03/20/2019 - 13:48
कत्ति दिन भयो उसले एक्लै विताएको । हो ऊ विद्रोही भयो । त्यसैले पनि होला मानिसहरु डराउँथे ऊसँग । तर ऊभित्र यत्ति कमजोरी थियो कि उसँग सङ्गत गर्नेहरु हरेकले ऊसँग केही न केही ठगिनै रहे । प्रतिकार गर्यो त सामाजिक रीतिरिवाज विरोधी भयो । धर्म विरोधी भयो । जो पनि भन्थ्यो यो सिधासिधा कुरा गर्छ त्यसैले यसले दुःख पाउँछ । यो कलियुग हो कलियुग, साँचो र सत्यको कहिल्यै बोलवाला हुँदैन । जो पनि उसलाई यही सम्झाई पञ्छेर जान्थ्यो । हो उसको बाटो सर्वभलाइको थियो तर कहिल्यै उसलाई सर्वसुलभ भएन ।
॥ बिकिरण ॥ — Wed, 03/20/2019 - 05:34
प्रेम अन्धो हुन्छ भन्थे, त्यसैले होला मैले पनि केही देख्न सकिन । मेरो उमेर आज ३२ पुग्यो । अचानक होसमा आएकी रहेछु । प्रेम सम्बन्ध देखि विवाह सम्बन्ध सम्म कसरी दिनहरू बिते, विवाह पछि बच्चा पाँउदा सम्म बेहोसीको माहौलमा कसरी जीवन बित्यो ,आजको दिन सम्म मैले यो कुरा थाहा पाएकी थिइन । त्यो प्रेम गर्दाको क्षण सम्झिँदा अहिलेको परिस्थति आउँला भन्ने कल्पनामा सोचेकी पनि थिइनँ । एउटा अप्रत्यासिलो अनौठो लाग्ने मेरो प्रेम कथा ।
॥ बिकिरण ॥ — Tue, 03/19/2019 - 00:37
सन् १९९० को कुरा थियो । मेरो विद्यालय काठमाडौंको उत्कृष्ट १० मध्य पर्ने सरकारी विद्यालय थियो । म र मेरो साथी मनिष कक्षा १० मा सँगै पदथ्यौ । म भर्खर १६ को भएकी थिए । कक्षाको उत्कृष्ट विद्यार्थीमा म पर्थे । सबै संग मेरो सम्बन्ध राम्रो नै थियो । मलाई विज्ञान विषय सबै भन्दा मन पर्ने विषय थियो । म विज्ञानमा सतप्रतिशत अंक ल्याउन चाहन्थे । मनिष को बुबाले विज्ञान विषय हाम्रै विद्यालयमा पढाउनु हुन्थ्यो । वहाँको मन पर्ने विद्यार्थी थिएँ भने मेरो मन पर्ने शिक्षकमा वहाँ पर्नु हुन्थ्यो ।
अशान्ति छ चारैतिर
म बाहुन !
ट्रान्जिटको ट्याउँ ट्याउँ
आऊ केही पल मसँग बिताएर हेर
माथि हेर्दा हिमाल (बालगजल)
डन्सी मन्सी थन्बा एला मायादा
तिमी सँगै चियाबारी डुलेर छुटें